Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Nafindra toerana noho ny fandrahonana baomba ny US Capitol complex
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fandrahonana baomba dia notaterina tokony ho tamin'ny 10 ora maraina tao amin'ny HHS Humphrey Building ao amin'ny 200 block of Independence Avenue ao afovoan-tanàna DC.
Lalana enina manodidina ny US Capitol sy ny Departemantan'ny Fahasalamana any Washington, DC no nakatona androany.
Nafindra toerana ny HHS Humphrey ny marainan'ny alarobia noho ny fandrahonana baomba.
Misy ny fisian'ny fampiharana lalàna lehibe manodidina ny tranoben'ny US Capitol sy HHS any Washington, DC.
Ny lalana rehetra manodidina ny US Capitol sy ny Departemantan'ny Fahasalamana amerikana any Washington, DC dia nakaton'ny polisy androany noho ny tatitra momba ny fandrahonana baomba any amin'ny faritra.
Lalana enina, anisan'izany ny Washington Avenue sy Third Street, no nakatona raha nanadihady momba ny fandrahonana baomba tao amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana sy ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana amerikanina ao amin'ny araben'ny Fahaleovantena ny polisy Capitol – izay nakaton'ny polisy ihany koa.
Betsaka ny mpitandro filaminana any an-toerana. Tazana teny amin'ny faritra nanakan-dalana ireo manamboninahitra misahana ny Fiarovana ny Tanindrazana ary olona marobe nafindra trano maromaro teo akaiky teo no nivory teo ivelan'ny US Capitol.
Sarah Lovenheim, sekretera mpanampy amin'ny raharaham-panjakana HHS, dia namoaka izao fanambarana manaraka izao:
“Anio maraina io dia nisy fandrahonana baomba voaray tao amin'ny Tranoben'ny Humphrey. Noho ny fitandremana be dia navoakanay ny trano ary tsy nisy tranga voalaza. Manara-maso akaiky ny zava-misy miaraka amin'ny Federal Protective Service izahay. Ny fanontaniana rehetra dia azo alefa any amin'ny Federal Protective Service. ”
HHS dia miara-miasa amin'ny Federal Protective Service hanombantombana ny toe-javatra, hoy i Lovenheim.
Ny tranoben'ny Capitol no lasibatry ny fandrahonana mihamitombo nanomboka tamin'ny volana janoary rehefa nanafika ny fivoriana iraisan'ny Kongresy ny vahoaka an'arivony mpanohana ny filoha teo aloha Donald Trump.